နိုင်ပြီ! Dopamine! ပြန်လုပ်ပါ သို့မဟုတ်မဟုတ် - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
နိုင်ပြီ! Dopamine! Repeat! ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ
comments: dopamine ရှင်းပြတကယ်ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါး
Loretta Graziano Breuning, Ph.D ဘွဲ့ကိုနေဖြင့်ဒီဇင်ဘာလ 11, 2011 အပေါ် Published Greaseless အတွက်
ပန်းတိုင်တစ်ခုသို့ရောက်ရှိ dopamine အစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကအကြီးခံစားရပေမယ့် spurt မကြာမီအဆုံးသတ်။ ထိုအခါသင် spurt ရှေ့မှာဖြစ်ဘူးသောသူဖြစ်လာသည်။ သင်နှင့်အတူအဆင်ပြေမဟုတ်ပါဘူးဆိုလျှင်, သင်ပိုမိုဂိုးရှာပိုမို dopamine လှုံ့ဆော်ဖို့အဆုံးမဲ့အားထုတ်မှုအတွက်ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားရနိုငျသညျ။
ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့က dopamine dips နှင့်မသက်မသာဖြစ်သည်။ မပျော်သောဓာတုပစ္စည်းများသည်ပျော်ရွှင်သောဓာတုဗေဒများကျဆင်းသွားသောအခါသင့် ဦး နှောက်၏အာရုံကိုအမိန့်ပေးသည်။ အရာရာတိုင်းဟာရုတ်တရက်ဆိုသလိုရင့်ရင့်ရင့်ရင့်ဖြစ်ပုံရတယ်၊
မပျော်ဓာတုပစ္စည်းရှင်သန်မှုခြိမ်းခြောက်မှုများရန်သင့်အားသတိပေးမှတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ သင့်အာရုံကိုရရှိသွားတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမကောင်းတဲ့ခံစားရတယ်။ တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသင်ငြီးငွေ့နေသည့်အခါဆာလောင်မွတ်သိပ်သို့မဟုတ်အိပ်နေတဲ့အခါမှာအစာစားခြင်းကဲ့သို့နောက်ခံပြဿနာကိုပြုပြင်တာတွေအားဖြင့်မပျော်ဓာတုပစ္စည်းသက်သာရာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တချို့မပျော်ဓာတုပစ္စည်းအမြဲဘဝရဲ့အကနျ့သည်နှင့်သင်ကမ္ဘာ၏သူဌေးကမဟုတ်ပါဘူးသင်တို့ကိုသတိပေးမှရှိပါလိမ့်မယ်။
သင့်အနေဖြင့်အတိတ်၌သင်တို့၏ပျော်ရွှင်ဓာတုပစ္စည်းအစပျိုးသောအရာလုပ်နေတာအားဖြင့်သင့်မပျော်ဓာတုပစ္စည်း mask နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်သာတိုတောင်းတဲ့အချိန်များအတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ မင်္ဂလာဓာတုပစ္စည်းလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ရှိမည်ဟုတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲမပေးခဲ့ပါဘူး။ သူတို့အလုပ်သူတို့တစ်ခုခုသင့်ရဲ့ရှင်သန်မှုကိုအားပေးအားမြှောက်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကသူတို့ကလာမယ့်ကောင်းသောအရာရန်သင့်အာရုံကိုရဖို့အဆင်သင့်ပါပဲဒီတော့သူတို့ဖွင့်မကြာမီအပြီးပိတ်လိုက်ပါ။
သင်သည်သင်၏မပျော်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့သင်ယူကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင်ဖြစ်နိုင်သောမည်သည့်လမ်းအတွက်အခြား dopamine ပေါကျကှဲများအတွက်ရှာဖွေနေများ၏အလေ့အထသို့ရပေလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ဦးနှောက်ကြိုးတယ်ဘယ်လိုပေါ် မူတည်. လာမည့်မြှင့်တင်ရေးသို့မဟုတ်နောက်တစ်နေ့ပါတီသို့မဟုတ်နောက်တစ်နေ့ဒိုးနတ်သို့မဟုတ်နောက်တစ်နေ့တောင်ကြီးတောင်ငယ်ဒါမှမဟုတ်လာမယ့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုရှာကြာလော့။ သင်ပိုမိုမပျော်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ပျော်ရွှင်ဓာတုပစ္စည်းဖြစ်ပေါ်ဖို့တစ်ဦးထက်ပိုလွန်မိပြီရှာပုံတော်ဆိုလိုတာကစိတ်ပျက်, ဖန်တီးပါ။
မကြာသေးမီကမျောက်လေ့လာမှု dopamine ၏အတက်အကျအံ့သြလောက်အောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစေသည်။ သုတေသီများဟာဟင်းနုနွယ်ရွက်အရွက်လဲလှယ်အတွက်သေးငယ်တဲ့အလုပ်တခုကိုလုပ်မျောက်၏အုပ်စုတစုလေ့ကျင့်သင်ကြား။ ထိုအခါစမ်းသပ်မည့်အစားဟင်းနုနွယ်ရွက်ဖျော်ရည် squirts အတူမျောက်ဆုခခြဲ့။ ဒါကြောင့်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအင်တန်ဖိုးကိုရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျော်ရည်အများကြီးပိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းဟင်းနုနွယ်ရွက်ထက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များ '' dopamine မြင့်တက်ခဲ့သည်။ Dopamine တော်မူသည်ကားများ၏ဦးနှောက်ရဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် "ဒီ reeeeally သင့်ရဲ့ရှင်သန်မှုလိုအပ်ချက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ "
ထိုအခါစပ်စုတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမျောက် '' dopamine အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကျဆင်းခဲ့သည်။ သူတို့ကနေ့တိုင်း task ကိုများအတွက်သီးဖျော်ရည်ကိုဆုလာဘ်ရတဲ့ဆက်လက်ပေမယ့်သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကတုံ့ပြန်ရပ်တန့်။ ဤသည် dopamine အသစ်သောဆုလာဘ်အကြောင်းကိုသတင်းအချက်အလက်သစ်များဖို့ဦးနှောက်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင်းပြသထားတယ်။ အဆိုပါသီးဖျော်ရည်ဟာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ပြီးတာနဲ့အဘယ်သူမျှမကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်ရဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်မျှမ dopamine ရှင်သန်မှုသင်ခန်းစာမှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာစမ်းသပ်မှုတခုသိသိသာသာဇာတျသိမျးရှိပါတယ်။ စမ်းသပ်ရည်ကိုရပ်တန့်နှင့်ဟင်းနုနွယ်ရွက်ပြန် switched ။ အဆိုပါမျောက်ဒေါသ၏ကိုက်ညီတဲ့နှင့်အတူဟင်းနုနွယ်ရွက်ရန်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ သူတို့ကသီးဖျော်ရည်ကိုမျှော်လင့်ခြင်းငှါလာကြလေသည်။ သူတို့ကမရခဲ့ဘူးသည့်အခါသူတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပျော်ခဲ့ကြပေမယ့်သူတို့ကရှိခဲ့သည့်အခါကသူတို့ကိုပျော်ရွှင်စေခဲ့ပါဘူး!
ဒါကကျနော်တို့အမွေဆက်ခံပါတယ်ရှင်သန်မှုယန္တရားဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ကိုမကြာမီသူတို့ကို habituates ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟောငျးဆုလာဘ်ကျွန်တော်တို့ကိုပျော်ရွှင်စေပါဘူး။ ဒါဟာပေါ့ပေါ့သငျသညျအဘယျကြာနှင့်အသစ်ဆုလာဘ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအလေးပေး။ သငျသညျတိုင်းတခဏအတွက်ပိုကြီးပိုကောင်းဆုလာဘ်ရနိုင်လျှင်သင်တစ်ဦးသေတတ်သောလူသားဖြစ်ခြင်း၏အဓိကမပျော်ရွှင်တွေ့ကြုံခံစားရန်ရှိသည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။ သို့သော်အပူတပြင်းရှာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်၏မပျော်ရွှင်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက်ထဲမှာအတွက်ဘယ်လိုနားလည်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကမပျော်ရွှင်များသောအားဖြင့် "ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်း" ပေါ်တွင်အပြစ်တင်နေသည်။ သင်ကိုရွေးချယ်အခါတိုင်းက "hedonic ပြေးစက်" ချွတ် step အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သင်ရုံသင့်ရဲ့မပျော်ဓာတုပစ္စည်းလက်ခံမယ့်အစားပျော်ရွှင်ဓာတုပစ္စည်းသူတို့နှင့်အတူ mask မှအပြေးအလွှားအသုံးပြုပုံများထဲမှလက်ငင်းထဲမှာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏မပျော်ဓာတုပစ္စည်းသူတို့ထံမှပြေး၏အလေ့အထအတိုင်းနီးပါးအဖြစ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုတွေ့လိမ့်မည်။
အဲဒီအစားသင့်ရဲ့ neurochemical အတက်အကျနှင့်အတူကိုမကျေနပ်တဲ့၏, သင်သည်သင်၏ရှင်သန်မှုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားနေအဘို့အသင့်ဦးနှောက်ကျေးဇူးတင်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အစောပိုင်းကနို့တိုက်သတ္တဝါများအနေဖြင့်အမွေဆက်ခံပါတယ်ဒါကဦးနှောက်ကိုအောင်မြင်စွာနှစ်ရာသန်းနှစ်ပေါင်းရှင်သန်မှုရာထူးတိုးပေးခဲ့သည်။
ကလုယူရာဥစ္စာ spots သည့်အခါတစ်ဦးကဆာလောင်မွတ်သိပ်သောခွင်ျသေ့ dopamine spurts ။ ဒါကြောင့်ရေကိုတွေ့သည့်အခါတစ်ဦးကရေငတ်ဆင်လွှတ်ပေး dopamine ။ သူကမြင့်မားသောသစ်ပင်တက်ပြီးနောက်အရည်ရွှမ်းသောသင်္ဘောသဖန်းနီးလာသည့်အခါတစ်ဦးကမျောက်ရဲ့ dopamine စီးဆင်း။ Dopamine ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်ဂိမ်းနောက်ယောင်ခံသို့မဟုတ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအဘို့စပါးကိုသိုလှောင်ခြင်းရှိမရှိ, ရှည်လျားအားထုတ်မှုအပေါ်သွားနေခဲ့တယ်။ Dopamine ပန်းတိုင်နားမှာရှိသောကြောင့်စွမ်းအင်သိုက်လွှတ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပြောပြသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းရှည်လျားသောနှစ်ပေါင်းမှတဆင့်ယနေ့ dopamine လောင်စာကျောင်းသားတစ်ဦး။ ဒါဟာလောင်စာသင်တန်း၏ရှည်လျားသောနာရီမှတဆင့်အနေနဲ့အားကစားသမား။ Dopamine ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်သန်မှုအတွက်ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ သင်တို့မူကားအစဉ်အမြဲစံချိန်တင်မြင့်တက်ပေးခြင်းသို့သင့်ဦးနှောက်ကို manipulate ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရှင်သန်မှုအကျိုးစီးပွားအတွက်တကယ်မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျလူသားမြားသညျအနှစျသနျးပေါငျးမြားစှာအတှကျအမှခေံပါပြီသောအတက်အကျကိုလက်ခံခြင်းပယ်ပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်။
သင့်ရဲ့မင်္ဂလာဓာတုပစ္စည်းတွေ့ဆုံရန်, ဒီဘာသာရပ်အပေါ်မှာငါ့သစ်ကိုစာအုပ်စောစော 2012 အတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ MeetYourHappyChemicals.com မှာနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ